I-Telefónica iyasilela ukufikelela kumanqanaba ee-euro ezingama-8 | Ezezimali
Olunye ukhuseleko olunomthamo omkhulu weekhontrakthi kwisalathiso sikazwelonke esikhethiweyo, i-Ibex 35, yiTeleco Telefónica. Kodwa ikwayenye yexabiso elibangela ukuphoxeka okukhulu phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuya kwinqanaba lokuba ingabinakho ukugqitha amanqanaba ngaphezulu kwe-8 yeuros ngesabelo ngasinye. Yinqanaba apho ukuthatha okanye ukungabikho kwezikhundla kule xabiso lemarike yemasheya kumiselwa. Lakhe inkalo yobugcisa Kwaye ayibonisi ukuba le ntshukumo ingoyisa kwixesha elifutshane. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa.
Kwelinye icala, ekuphela kwento ethile okwangoku kukuba ixabiso leTelefonica liyaphuhliswa intshukumo yokubuyela umva emva kokuba kusombiwa inkxaso. Kodwa ngokuchaseneyo, into engayiphumezeliyo kukoyisa ubume bokuncipha kokuphakama kunye nokuhla okuqala ukusuka kuphakama lonyaka. Le ntshukumo ngokungathandabuzekiyo inokuthoba ubunzima bezinto zobugcisa beli xabiso kwimeko yemarike yemasheya yangoku. Ingasetyenziselwa ukwenza urhwebo olukhawulezayo lwezemali ukuthatha ithuba lokungazinzi kumaxabiso alo kwezinye zeeseshoni zokurhweba.
Okwangoku eli xabiso lingaphezulu kokugcina kunokuthenga kuba iimfuno ezisisiseko zokuvula izikhundla kwiimarike zezabelo kukuchazwe ngasentla ngaphezulu kwe-8 yeuros ngesabelo ngasinye. Kwelinye icala, kubonakala ngathi ayinokuphuhlisa i-downtrend ebonakalisiweyo. Ngale ndlela, umngcipheko ubonakala ngathi ulawulwa ngakumbi ngaphezu kolunye ukhuseleko. Ukubandakanya ipotifoliyo yotyalo-mali iprofayili yotyalo-mali oluncinci noluphakathi olwenziwe lolona lukhuselekileyo okanye olukhuselayo. Ukuze ngale ndlela, bangabinakuphulukana nelahleko egqithisileyo kwizikhundla ezivulekileyo kwimarike yesizwe.
1 I-Telefónica, iya kuba neendleko zokucaphula kwii-euro ezingama-10
2 Ulwabiwo lwesahlulelo esiphezulu
3 Iziphumo zemali ngoJanuwari-Matshi
I-Telefónica, iya kuba neendleko zokucaphula kwii-euro ezingama-10
Ngokumalunga nexesha eliphakathi nelide, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba eli xabiso lentengiso sisindululo esingayi kuba lula kakhulu ukwenza inzuzo kwelona xesha lifutshane. Ngenxa yenkxaso enkulu enee-euro ezingama-8 ngesabelo ngasinye kwaye iya kufuna uxinzelelo lokuthenga olunamandla kwiinyanga ezizayo. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku khange ikwazi ukuyithoba le nkxaso ekuphoxekeni kwabo bonke abaninizabelo. Ukuba kukho nakweyiphi na imeko, esinye sezitshixo esiza kwahlulahlula isiphelo sayo esisezantsi. Okanye yintoni enye, ukuba kuya kufuneka uvule izikhundla okanye ungabi lixabiso.
Ngelixa kwelinye icala, kubalulekile ukugxininisa ukuba ityala likaTelefonica yenye yeengxaki ezinokuba nazo i-teleco ukufezekisa iinjongo eziphezulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ngamanye amagama, kunzima kakhulu ukufikelela kweli nqanaba locaphulo, ubuncinci kwiinyanga ezizayo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba lelinye lawona maxabiso esizwe anodyne ekukhetheni kuwo onke amaxabiso. Apho kunzima kakhulu ukwenza imisebenzi yorhwebo ukwenza ukonga kunenzuzo ngokukhawuleza. Ngokungafaniyo nokwenzekayo nezinye izindululo kwicandelo lotyalo-mali.
Ulwabiwo lwesahlulelo esiphezulu
Esinye sezikhuthazo zokungena kwizikhundla zenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-Ibex 35 kukuba ibonelela ngesivuno esikhulu. Ngomdla wonyaka osisigxina noqinisekisiweyo oko kukuthi malunga neepesenti ezi-6. Ngeentlawulo ezimbini zonyaka kwiakhawunti ezenziwa ngeenyanga zika-Meyi no-Novemba. Ukuba kwiqela lezona nzuzo zinenzuzo kwimarike yaseSpain. Ngelixa kwelinye icala, yenza abatyali mali abalondolozayo okanye abakhuselayo abakhethe esi sicelo semarike yemasheya iminyaka eliqela. Njengesicwangciso sokwenza ukonga ngeniso kwenye indawo yokujonga.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ngokwesicwangciso-qhinga ipotifoliyo yotyalo-mali esekwe kwingeniso esisigxina inokusekwa ngaphakathi kukwahluka. Ngexesha apho iimveliso zebhanki zinqabile bavelisa inzala ephezulu kune-1%. Umzekelo, kwiidipozithi zebhanki zexesha elide, amanqaku edibeneyo okanye iibhondi. Ngenxa yexabiso eliphantsi lemali kwaye oku kukhokelele ekubeni le asethi yemali ikwizinga eliphantsi lembali, kwi-0%. Yintoni echaphazele imivuzo ephantsi kwiimveliso zebhanki ezahlukeneyo.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba iTelefonica ityhilwe kwisitishi secala ihamba phakathi kwe-7 kunye ne-8 ye-euro isenzo. Apho ekuphela kwesicwangciso esinokusetyenziselwa ukuphuhlisa isikhundla sithathe ibhendi esezantsi yamaxabiso ayo ukuzama ukuthengisa izabelo kufutshane ne-8 euro. Nangona kunjalo, kufuna amava abanzi kwicala labatyali mali kolu hlobo lokuhamba kwexesha elifutshane. Ngemida yokusebenza ebonakaliswa kukuxinana kwaye ayilungelelaniswanga kuzo zonke iiprofayili zabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Iziphumo zemali ngoJanuwari-Matshi
I-Telefónica namhlanje ivelise iziphumo zayo kwikota yokuqala yonyaka, ngokukhawulezisa kokukhula kwendalo ukusuka kwingeniso ukuya ekusebenzeni kwemali. Iziphumo zekota zikwabonisa ukusebenza kulwabiwo lwezixhobo kunye Iphepha lomncono elomeleziweyo, enkosi kunciphiso lwetyala (kufutshane ne-10% ngonyaka-kunye-ngonyaka) kunye nomsebenzi wezemali wekota ongaphezulu kwe-10.000 yezigidi zeerandi.
Los ngeniso kwikota ime kwi-12.190 yezigidi ze-euro, (- 7,2% vs 1Q17; + 1,9% organic). Ukuvela kwendalo kwengeniso kuxhaswa ngenqanaba lokukhula ngamandla kwingeniso evela kwintengiso yeetheminali (+ 16,5%) kunye nokusebenza ngokukuko kwengeniso yeenkonzo (+ 0,8%). Ngaphandle kwempembelelo ezimbi zommiselo kwikota yokuqala. Ngelixa kwelinye icala, ingeniso iya kunyusa i-3,1% ngonyaka-kwi-organic ye-organic. Ezinye iziphumo zeshishini, ngokufutshane, aziboniswanga kwixabiso lezabelo. Enkosi kuncitshiso lwetyala (kufutshane ne-10% ngonyaka-kunye-ngonyaka) kunye nomsebenzi wekota wekota ongaphezulu kwe-10.000 yezigidi zeerandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Telefónica iyasilela ukufikelela kumanqanaba ee-euro ezingama-8